Azo atao ve ny mampiasa iPhone halatra? | Avy amin'ny mac aho
Applelised | | iPhone, About us
Mampalahelo fa isika rehetra izay nijaly tamin'ny nofontsika dia nangalatra a iPhone nametraka ny fanontaniantsika tamin'io ihany koa isika. Afaka mampiasa indray ve ianao a iPhone mihidy amin'ny iCloud?
Raha nisy nangalatra iPhone iray dia azo antoka fa nanontany tena ianao raha misy olona tena afaka mampiasa azy io indray
Marina fa mangalatra ny anao ry zareo iPhone Mila manana iray fotsiny ianao, ary indrisy fa maro ny olona mijaly amin'ny fangalarana finday avo lenta isan'andro. Amin'izao fotoana izao, ny fahaverezan'ny telefaonintsika dia tsy raharaha fotsiny noho ny fahaverezan'ny fitaovana elektronika tenany, na inona na inona sanda ara-toekarena ananany na ny toe-batana misy azy. Ny fahaverezan'ny angon-drakitra raketin'izy ireo dia lehibe kokoa, ary ambonin'izany rehetra izany noho ny zavatra tena ilaina ho antsika amin'ny asantsika isan'andro. Ny finday avo lenta izay ampiasain'ny olona amin'ny fomba mahazatra isan'andro, dia mety misy antsipirian'ny banky, adiresy manokana, sary misy sanda ara-pientanam-po, na koa angon-drakitra mety hanimba ny tompon'ny iray na ho an'ny antoko fahatelo.
Araka ny sekreteram-panjakana misahana ny fiarovana, nandritra ny taona 2014 (tsy manana angon-drakitra ho an'ny 2015 izahay) dia fitarainana 279.000 XNUMX mahery no napetraka noho ny fangalarana finday, izay mitovy amin'ny Halatra finday isaky ny roa minitra !! Miaraka amin'ireto isa mangatsiaka ireto, ny kopian'ny backup nomaninay mandrakariva nomen'ny data dia misy dikany betsaka. Mazava fa ireo izay tsara vintana tsy nijaly manokana ny fangalarana ny findainy finday, dia mahafantatra olona maromaro izay nahatonga izany. Tao anatin'izay taona faramparany, ny orinasa mpamokatra smartphone rehetra dia nanokana ampahany lehibe amin'ny loharanon-karenany mba hametrahana ny fitaovany ho azo antoka araka izay tratra, saingy araka ny hevitrao dia tratra izany?
Ireo mpampiasa iPhone, miaina somary milamina kokoa isika taorian'ny nanombohany iOS 7, kinova hamoahana ny fampiharana «Find my iPhone», dia efa nangatahana izahay hiditra miaraka amin'ny antsipirian'ny kaontinay. ID ID Apple, ary ny antsika iPhone tsy azo idirana tanteraka izy ireo, ary raha tsy misy azy ireo, satria ratsy kely kokoa, dia tsy afaka nampiasa izany mihitsy ny mpangalatra. Fa manana halatra iPhone? Indrisy fa tsia. Ary io no manontaniantsika ny tenantsika, mety hisy ve izay mangalatra ny findaiko afaka mampiasa azy io tsy misy ny Apple ID? "Fetsy" tsy tambo isaina no mandeha amin'ny tranokala hamaha ny iPhone na iPad, saingy tsy nisy nanaporofo izany.
Tsy ampy herintaona lasa izay dia fantatray ny fomba iray hosoka izay misy ny fandefasana SMS amin'ny telefaona azonay aseho amin'ny efijery mba hampandre anay raha sanatria iPhone nangalatra nanoro hevitra a iPhone (Nampiasaina tamin'ny iPad ihany koa io), ary raha hahitana azy ianao dia mila mamantatra ny tenanao amin'ny Apple ID ao anaty rohy misy fidirana amin'ny iCloud. ICloud dia azo lazaina fa niditra, ary tamin'ny alàlan'ny fampidirana ny angon-tsainay tao amin'ilay pejy naka tahaka azy, tamin'ny alàlan'ny antsoina hoe phishing, dia azon'ireo mpangalatra ny ID sy ny teny miafinay mba hamohana ny telefaona ary afaka mampiasa na mivarotra izany. Very mandrakizay.
Na izany na tsy izany, ny andro mahavery antsika na ny antsika iPhoneNa dia misy manamaivana ny fanaintainana aza ny fananana sary amin'ny fandefasana sy dika mitovy amin'ny fandaharam-potoana sy data ao amin'ny iTunes, tsy misy manala ny tsy fahafaliana lehibe aterak'izany. Ary na dia misy aza ny rafitra fanoratana sy fiarovana vaovao napetraka dia tsy azontsika atao ny manontany tena, ho afaka hampiasa ny ahy ve izy ireo iPhone mbola mihidy? Sa raha tsy afaka mampiasa azy ireo izy ireo, misy dikany ve ny mangalatra a iPhone?.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » iPhone » Azo atao ve ny mampiasa iPhone halatra?
Azoko an-tsaina fa na iza na iza nangalatra ny finday X, dia hivarotra azy amin'ny vola madinika vitsivitsy, amin'ny trano natokana hanamboarana telefaona.
Hafahafa ny fiainana, tonga ao amin'ny Mac ny traikefa nahafinaritra mifototra amin'ny dia mandeha amin'ny fotoana